Andinin-teny famporisihana 13: Amin'ny fotoan-tsarotra indrindra?
Andininy mood 13: Amin'ny fotoan-tsarotra
Ny zavamananaina rehetra dia mora mandany fotoan-tsarotra, na noho ny aretina, ny olana eo amin'ny fianakaviana na ny toe-javatra hafa. Amin'izay fotoana izay dia afaka miantehitra amin'ny sasany isika andian-tsoratra ho an'ny fotoan-tsarotra izany dia nosoratana tao amin'ny soratra masina mba ahafahantsika mampifanaraka azy ireo ao anatin'ny fotoan-tsarotra lalindalina.
Ny tenin'Andriamaitra dia nahazo aingam-panahy avy tamin'ilay Andriamanitra Ray any an-danitra izay nampiasa ho fitaovana mpanitsy olona izay nihazona ny fanekeny sy nanompo sy nanara-dia azy ary izany no antony rehetra hitantsika ao anatin'izany boky masina izany. fotoana mila izany.
Misy lahatsoratra ao amin'ity boky masina ity izay toa nosoratana manokana ho antsika, mila miomana hikaroka azy ireo fotsiny isika ary izy ireo, tarihin'ny Fanahy Masin'Andrimanitra iray ihany no hahatakatra antsika ary hanome ny fanahintsika ny tanjaka, ny hery ary ny zavatra rehetra fa mila afaka miatrika ny toe-javatra misy antsika isika ary afaka mandroso. Ireto misy andinin-teny na andininy ara-baiboly vitsivitsy mba hahafahanao mamaky amin'ny fotoan-tsarotra.
1 1. Matoky an'Andriamanitra
3 3. Aza mitsahatra ady mihitsy
4 4. Manaporofo fa mahery ianao
5 5. Andriamanitra hanampy anao amin'ny zavatra rehetra
6 6. Tsy hanadino anao mihitsy Andriamanitra
7 7. Minoa ny Tompo
8 8. Mino ny herin 'Andriamanitra
9 9. Miaina amin'ny fiadanana
10 10. Miady amin'ny fahasambarana
11 11. Mahazo fandresena fitiavana amin'ny hafa
12 12. Manamafy orina ny fonao
13 13. Araho ny lalan'ny Tompontsika
1. Matoky an'Andriamanitra
1 Korintiana 10:13 ” Tsy misy fakam-panahy tonga aminao izay tsy fahita amin'ny olona; Ary mahatoky Andriamanitra, Izay tsy hamela anao halaim-panahy mihoatra noho izay zakanao, fa amin'ny fakam-panahy dia hanome làlana fandosirana koa ianao hanoherana azy.
Tokony hatoky isika fa ny soa tsara dia nomen'Andriamanitra antsika ho afaka amin'ity fahasahiranana ity. Fantany ny fontsika sy ao anatin'ny fotoan-tsarotra, matetika isika dia afaka manadino matetika ary tsy afaka mamantatra ny fivoahana na dia eo am-pelatanantsika aza, io no fotoana tokony hatokisantsika an'Andriamanitra sy hahazoany ny fiadanany ho any fa tsikaritray fa lalana mandositra izay omeny antsika.
Deoteronomia 32: 6 “… Tsy rainao va izay namorona anao? Izy no nanao sy nanorina anao. ”
Izy, Andriamanitra Tsitoha, no raintsika ary rehefa tsara izy dia mikarakara antsika mandrakariva. Fantany isika hatramin'ny talohan'ny naha-tao an-kibon-drenintsika ary izany no mahatonga azy ho mpanampy tsara indrindra azontsika ananana, indrindra amin'ireo fotoana izay eritreretintsika fa el tontolo amintsika io. Raintsika sy mpamorona izy, mikarakara antsika izy.
3. Aza mitsahatra ady mihitsy
Hebreo 11: 32-34 “Ary inona koa no holazaiko? Satria tsy ampy ny fotoana hilazana ahy momba an'i Gideona, Barak, Samsona, Jefta, David, ary koa Samoela sy ireo mpaminany; fa tamin'ny finoana no nandresen'izy ireo fanjakana, nanao ny rariny, nahatratra ny fampanantenany, nanarona vava liona, namono afo tsy voahaja, nandratra ny lelan-tsabatra, naka hery avy amin'ny fahalemena, nanjary matanjaka tamin'ny ady, nitsoaka tafika, ".
Tokony hieritreritra isika fa tahaka ny nahombiazan'ireto lehilahin'Andriamanitra ireto dia hahatratra azy koa isika. Tsy lavorary izy ireo ary nandia toe-javatra sarotra saingy nofenoin'Andriamanitra izy ireo ka afaka niverina, ny finoana dia afaka manampy antsika hanana fiadanana na dia mandalo tafio-drivotra mahery aza isika.
4. Manaporofo fa mahery ianao
1 Petera 3:12 “Fa ny mason'ny Tompo dia mitsinjo ny marina, ary ny sofiny mihaino ny fivavahany; Fa ny tavan'ny Tompo dia manohitra ny mpanao ratsy. "
Ny finoana no mahatonga antsika hino fa vonona hihaino ny vavakay rehetra, indrindra ireo ataontsika izay ao anatin'ny fotoan-tsarotra. Mihaino antsika Andriamanitra ary mameno antsika amin'ny heriny mba hananantsika herim-po ary tsy ho ketraka amin'ny fahasarotana.
5. Andriamanitra hanampy anao amin'ny zavatra rehetra
2 Korintiana 4: 7-8 “Fa izahay kosa dia manana izao rakitra izao amin'ny tanimanga, ka ny avy amin'ny hery dia avy amin'Andriamanitra, fa tsy avy aminay, izahay dia sahirana amin'ny zava-drehetra, fa tsy ory; amin'ny fahasahiranana, fa tsy kivy. ”
Hitantsika ato amin'ity andininy ity fa mandalo fahoriana hatrany ny olombelona, ​​fa ao amin'Andriama- nitra ireo fahoriana ireo dia tsy mangalatra fahatoniana sy fahatokisana an'Andriamanitra fa izany no manakana antsika tsy ho tratry ny alahelo sy famoizam-po. Manana an'Andriamanitra ao anatintsika isika ary ny heriny no mampatanjaka antsika amin'ny fotoana rehetra.
6. Tsy hanadino anao mihitsy Andriamanitra
Efesiana 6:10 "Ho an'ny sisa, ry rahalahiko, mahereza ny Tompo sy amin'ny herin'ny faherezany".
Antso fanasana tsotra izao hanatanjahana ny tenantsika ao amin'ny Tompo, izany no tokony ho laharam-pahamehana ao anaty alahelo ary amin'ny fotoana rehetra. Aza hadino fa Andriamanitra no mpamatsy hery antsika amin'ny fotoana ilaintsika. Aoka isika tsy ho ketraka fa amin'ny mifanohitra amin'izany kosa, aoka isika haka hery avy amin'Andriamanitra ary handroso.
7. Minoa ny Tompo
Salmo 9: 10 “Izay matoky ny anaranao dia hatoky anao,
Satria tsy nahafoy an'izay nitady anao Andriamanitra ô.
Ao amin'ity lahatsoratra ity dia hitantsika fa tsy maintsy miahiahy aloha isika amin'ny fahalalana ny herin'ny Tompo ary, amin'izao fotoana izao, tsy mampisaraka antsika aminy. Io salamo io dia fampanantena fa Andriamanitra mihitsy no tsy hahafoy an'izay mitady azy, koa aoka isika hitady ny Tompo ka hiaro antsika mandrakariva.
8. Mino ny herin 'Andriamanitra
Efesiana 3:20 "Ary ho an'izay mahery indrindra hanao ny zava-drehetra bebe kokoa mihoatra noho ny angatahintsika na takatsika, araka ny hery izay miasa ato amintsika."
Afaka mahazo antoka isika fa mahery Andriamanitra, na dia amin'ireo zavatra izay heverintsika fa tsy misy vahaolana aza. Mampanantena antsika Izy fa satria mahery izy amin'ny famoronana ny zavatra rehetra, dia ho afaka hamaly izay angatahintsika na dia mihoatra aza ny hoe azontsika na tsia.
9. Miaina amin'ny fiadanana
Mika 7: 8 “Ianao, ry fahavaloko, aza mifaly ahy, fa na dia lavo aza aho dia mbola hitsangana ihany; na dia mitoetra ao amin'ny maizina aza aho, Andriamanitra no ho fanazavana ahy ”.
Lahatsoratra izay miresaka momba ny ho avintsika, milaza amintsika fa na dia manana fotoana ratsy isika ary mifaly amin'ny fahavalontsika ny fahavalontsika, Andriamanitra dia ho lasa herintsika atsangana hatrany, ao amin'ny fahazavana azontsika ao afovoan'ny aizina. manazava ny lalana mba tsy hahatafintohina antsika.
10. Miady amin'ny fahasambarana
Matio 28: 20 “Mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anao; ary indro, momba anao isan'andro Aho mandra-pahatongan'ny faran'izao tontolo izao. Amena. "
Mampanantena izany. Nangataka antsika hitandrina ny fampianarany rehetra ilay lehilahy ary avy eo dia manome toky antsika fa ho mpiara-miasa aminay mandra-pahatongan'ny faran'izao tontolo izao. Amin'ireny fotoana ireny izay mivavaka mba hanary hery, herimpo ary na finoana aza, tadidio fa miaraka amintsika foana izy.
11. Mahazo fandresena fitiavana amin'ny hafa
Hebreo 4: 14-16 “Koa satria manana Mpisoronabe lehibe nanindrona ny lanitra isika, dia Jesosy Zanak'Andriamanitra, aoka hohazonintsika hatrany ny asantsika. Satria tsy manana Mpisoronabe isika, izay tsy mahay mankasitraka ny fahalementsika, fa olona iray nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra araka ny itovizantsika, fa tsy misy ota. Andeha isika hatoky tsara eo amin'ny seza fiandrianan'ny fahasoavana, hahitana famindram-po ary hahita fahasoavana ho an'ny fanampiana mety. "
Tokony ho tsaroantsika fa i Jesosy mihitsy no nihinana teto an-tany ary nijaly tamin'ny nofontsika ny aretina rehetra, dia fantany isika ao afovoan'ny zavatra mety handalovantsika ary hamindra fo amintsika. Andao hijanona akaiky azy isika ary hankafy ny fikarakarany sy ny fitiavana maharitra azy amin'ny fiainantsika.
12. Manamafy orina ny fonao
Nahoma 1: 7 «Tsara Andriamanitra, hery amin'ny andro fahoriana; ary fantany ireo matoky azy ”.
Tsara Andriamanitra ary ity dia zavatra efa fantatsika hatry ny fony mbola kely satria tao am-piangonana no nolazaina foana momba ny Andriamanitra tsara fanahy ary izany ihany koa ny fahatsarana izay mitazona antsika mijoro na dia mandalo fotoana rehefa mahatsiaro reraka isika. Izy no mpikarakara sy mpitari-dalana antsika.
13. Araho ny lalan'ny Tompontsika
Apokalypsy 21: 4 “Hofafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony; ary tsy hisy fahafatesana, tsy hitomany intsony, tsy hisy fitarainana, na fanaintainana; satria tonga ny zavatra voalohany. ”
Izahay dia manana ny toky fa ilay tompon-tany ihany no hanaisotra ny ranontsika ary ho avy ny fotoana izay tsy hisy intsony ny fotoana hahatsapana alahelo, irery, lao, malemy na tsy misy herim-po, fa ho fitsaharantsika izany. Aleo tsy hiala aminy isika ary hikarakara anay izy ary hameno anao amin'ny heriny.
Manantena aho fa nankafizinao ireo andinin-teny momba ny fampaherezana ara-baiboly tamin'ny fotoan-tsarotra.
Vakio ihany koa ity lahatsoratra ity ilay zanaka adala y Andininy faha-11 momba ny fitiavan'Andriamanitra.
Fivavahana Anglikanina - Fantaro amin'ny antsipiriany ity fivavahana ity